Side Sakunye Ekugqibeleni—Ibali Lokwenene | ULinda noSally Ong
Kubalisa uLinda noSally Ong
ULinda: Xa ndandineminyaka eyi-12, umama wandichazela ukuba ndandinodadewethu omncinane owakhuliswa ngabanye abantu. Ndandizibuza enoba naye wazalwa engeva njengam na. Kodwa ndakhula ndingamazi.
USally: Ndandingazi ukuba andikhuliswa ngabazali bam. Umama owandikhulisayo wayendikhohlakalele, endibetha kwaye endiphethe njengesicaka, ngenxa yoko ndakhula ndingonwabanga, ndililolo—yayiyenye intlungu leyo kumntu ozalwe engeva. Ndadibana namaNgqina kaYehova ndaza ndaqalisa ukufunda iBhayibhile. Wathi akuyiva loo nto umama owayendikhulisa, wanditywatyusha ngebhanti waza watshintsha isitshixo somnyango, endenza ibanjwa. Xa ndandineminyaka eyi-20, ndabaleka ekhaya ndaza ndathathwa ngamaNgqina. Ekuqaleni kuka-2012, ndabhaptizwa.
ULinda: Xa ndandineminyaka eyi-20, ndafundelwa ngamaNgqina kaYehova. Kamva, ndaya kwiindibano zesithili eJakarta, apho ucwangciso lwalutolikelwa abangevayo. Apho ndadibana nabanye abangevayo, kunye noSally, intombi eliNgqina eyayihlala kuMntla weSumatra. Yayingathi ndimqhelile kodwa ndingazi ukuba ndimqhelele phi.
USally: Mna noLinda saba ngabahlobo. Ndandinento ethi siyafana, kodwa andayihoya loo nto.
ULinda: NgoAgasti 2012, usuku oluphambi kokuba ndibhaptizwe, ndacinga kakhulu ngodadewethu owalahlekayo, ndaza ndafuna ukumazi. Ndathandaza kuYehova ndathi: “Ndincede ndifumane udadewethu, kuba ndifuna ukumchazela ngawe.” Kungekudala emva koko, umama wafumana umyalezo ongalindelekanga owawuvela kumntu onolwazi ngodadewethu. Waqala ngolu hlobo ke umkhondo owenza ndamfumana uSally.
USally: Xa uLinda wandicacisela ukuba ndingudadewabo owalahlekayo, ngoko nangoko ndakhwela inqwelo-moya eya eJakarta ndifuna ukumbona. Ndafika kwisikhululo seenqwelo-moya uLinda, utata nomama, kunye nomnye udadewethu omdala bendilindile. Ndandingazi nokuba mandithini. Sangana, saphuzana—umama wandiqinisa engandiyeki. Sasilila sonke. Benyembezana, umama notata baxolisa ngokundinikezela ukuba ndikhuliswe ngabanye abantu, saphinda salila.
ULinda: Ngenxa yeendlela ezahlukeneyo esikhule ngazo, siye safunda ukwamkela ubuntu bethu obahlukeneyo neendlela zethu ezingafaniyo zokwenza izinto. Kodwa sithandana kakhulu.
USally: Ngoku mna noLinda sihlala kunye ibe sisebandleni elinye lentetho yezandla eJakarta.
ULinda: Ngaphezu kweminyaka eyi-20 mna noSally besingazani. Siyambulela uYehova kuba side sakunye ekugqibeleni!
Text Iimpapasho onokuzikhuphela Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2016